AMP plugin neGoogle Analytics - SN
AMP plugin neGoogle Analytics
Iyo HTML-kusvika-AMPHTML inoshandura uye AMPHTML plugins inoisa otomatiki makodhi eGoogle Analytics ekutevera muGoogle AMP peji. Kunyangwe akawanda account tracking inotsigirwa!
The nokukurumidza Mobile Pages jenareta rwoga anoona kana Google Analytics club bumbiro iri yakaiswa panzvimbo yako uye anoverenga kubva unoenderana Google Analytics club ID, i.e. ari UA nhamba.
Iyo AMPHTML jenareta inoziva zvakare kushandiswa kunokwanisika kwenhamba dzinoverengeka dzeUA , sezvazvinoshandiswa, semuenzaniso, mu 'Multiple Account Tracking' . Iyo AMP yepamhepo jenareta inoshandura otomatiki manhamba ese eGoogle Analytics UA kuita 'amp analytics' tag uye nekudaro inomisikidza yaimbove iripo Google Analytics yekutevera pane iyo AMP peji!
Nemhando iyi yeGoogle Analytics kusangana, ese ma analytics ekutsvaga data eiyo AMP peji anoonekwa mune yako (!) Google Analytics account , saka iwe unozoramba uchigamuchira ese AMP yekutevera data yakaunganidzwa munzvimbo yakajairwa!
Iyo AMP online jenareta inotsigira ese anotevera maGoogle Analytics shanduro:
Google Analytics IP kusazivikanwa 'anonymizeip'
Mune dzimwe nyika (semuenzaniso kuGermany) chimwe chimiro chinofanira kuzadzikiswa kuitira kuti ugone kushandisa Google Analytics maererano nemitemo yekudzivirira data: Kushandiswa kweIP anonymization. Nechikonzero ichi, Iyo Inomhanyisa Nhare Mapeji Jenareta inongotsigira basa reGoogle Analytics 'anonymizeip' uye inoseta yekupedzisira octet yeIPv4 kero kana yekupedzisira 80 bits yeIPv6 kero kusvika zero isati yachengeta data yemushandisi. Izvi zvinoreva kuti kero yakakwana yeIP haina kumbonyorwa kune hard drive yeGoogle Analytics server!
Google Analytics IP kusazivikanwa haina kunyatso kuitiswa neiyo Inokurumidza Mapeji Mapeji jenareta, asi ndiyo yakajairwa seti ye 'amp-analytics' tag kubva kune yepamutemo AMPHTML zvinyorwa .
Dhata pane iyo 'amp-analytics' tag saka kazhinji inopfuudzwa isingazivikanwe!
Google Analytics data rekuchengetedza ruzivo rwemapeji e AMP
Kuti iko kuwedzera otomatiki kweGoogle Analytics kuteedzera kuti ishandiswe mukuteedzana nemitemo yekuchengetedza data, inoda chinyorwa chakajeka mukuzivisa kwedziviriro yewebhusaiti yako!
Pamapeji akagadzirwa e AMP anowanikwa kuburikidza neamp-cloud.de, panoperera peji rega re AMP, panotaurwa nezve kudzivirirwa kwedata kweam-cloud.de, iyo iine ruzivo rwakakodzera rwekuchengetedza data kuGoogle Analytics kuteedzera. .
Nekudaro, kana iwe ukashandisa imwe ye amp-gore AMP plugins, iwe unofanirwa kuisa chinyorwa paGoogle Analytics yekutevera mune zvakavanzika mutemo webhusaiti yako!
amp-cloud.de inotora kuti hapana mutoro wekutyora chero kupi zvako.Iwe unofanirwa kuzviongorora uye nekuzviongorora pachako kana yako Google Analytics account uye neAMP mapeji akaiswa nenzira yakachengetedzeka zviri pamutemo! (Izwi rakakosha: Chibvumirano cheGoogle Analytics chekuodha dhizaini maererano ne § 11 BDSG ).